फीफा 12 कसरी चलाउन? सही कुरा गरिरहेको
मिति खेल फीफा श्रृंखला सबैभन्दा लोकप्रिय फुटबल सिमुलेशन को एक हो। उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा मात्र प्रो विकास फुटबल को एक श्रृंखला हुन सक्छ: यी दुई लाइनहरु सबै भन्दा राम्रो भर्चुअल फुटबल को प्रशंसक बीच ज्ञात छन्। खेल फीफा तिनीहरूलाई प्रत्येक सुरूवात संग वा गेमप्लेको द्वारा आफ्नै समस्या थियो, लामो समय को लागि जाने, तर केवल फीफा 12, जो 2011 मा बाहिर आए मा, त्यहाँ उडान संग एक धेरै गम्भीर समस्या थियो। सिम्युलेटर को संस्करण सम्बन्धित रूसी भाषा बोल्ने फोरम मा, रिपोर्टहरू कि फीफा 12 शुरू गर्दैन देखा पर्न थाले। समस्याको लगभग सबै थिए। त्यसैले, यो कारण एकदम सरल फीफा 12 कसरी चलाउन बाहिर आंकडा गर्न केही समय लाग्यो - खेल को नयाँ संस्करणमा बस रूसी वर्ण मार्गमा खेल डाटा संग फोल्डरमा कथित छैन। तपाईं फोल्डर "खेल" मा फीफा 12 स्थापित यदि त्यो छ, र मा फोल्डर "खेल हो", र त्यसपछि तपाईं शुरू संग एक समस्या छ। , यो ड्राइभ सी मा स्थित छ कि फोल्डर "मेरो दस्तावेज" मा स्थित छ - थप गम्भीर खेल छैन मूल फोल्डर सम्बन्धमा प्रश्न को भाग थियो र सुरक्षित छन्। सम्पूर्ण क्याच यो फोल्डर लिन र "खेल" भनिएको छ जो कि सामना गर्न सकेसम्म पुन: नामकरण गर्न सजिलो नहुन सक्छ। त्यसैले समस्या बिना फीफा 12 चलान कसरी प्रश्न, संग थप रचनात्मक व्यवहार गर्न भएको थियो।
निस्सन्देह, यो असुविधाको धेरै श्रेणीमा खेल को प्रशंसक ल्याइएको छ, तर यो कहिल्यै फीफा 12 चलान कसरी समाधान खोज्न प्रयास बाँकी थियो वास्तविक प्रशंसक जवाफ चाँडै पर्याप्त आए - Windows मा प्रशासक खाता मार्फत खेल स्थापना गर्न केवल पर्याप्त, र कुनै पनि माध्यम अन्य, जो पनि यस उद्देश्यका लागि विशेष सेट गर्न सक्नुहुन्छ। तथ्यलाई प्रोफाइल प्रशासक अधिकार छ भने छैन र प्रणाली केन्द्रीय छ, त्यसपछि यसलाई मा फोल्डर नाम कुनै पनि समस्या बिना परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने छ। तर सबैको कार्यक्रम को क्षण मा हात मा तुरुन्तै छन् आवश्यक हुँदा धेरै सुविधाजनक छ अर्डर फीफा 12 मा प्ले मा एक नयाँ प्रोफाइल केवल सिर्जना गर्न चाहन्छ। खेलाडीहरूलाई एउटै प्रोफाइल मा फीफा 12 रन कसरी, त्यो छ, प्रशासक प्रोफाइल विचार थियो कि त। निर्णय यो जस्तो हुन सक्छ भन्दा धेरै सजिलो साबित: अर्को प्रोफाइल सिर्जना गर्न मात्र आवश्यक थियो, तर उसलाई प्रशासनिक अधिकार दिन बस एक खेल मा सेट छैन, तर। कि पछि, सबै आवश्यक कार्यहरु मुख्य प्रोफाइल उपलब्ध छन्, र तपाईं सजिलै रूसी भाषा बोल्ने अंग्रेजी बोल्ने मा फोल्डरहरू नाम परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सुरक्षित, आफ्नो मुख्य प्रोफाइल प्रशासनिक अधिकार फर्कन र सिर्जना प्रोफाइल मेटाउन। भनी तपाईं फीफा 12 प्ले जाँदैछन् भने जान्नु आवश्यक सबै छ।
यस सन्दर्भमा खेल सिम्युलेटर लागि प्रतियोगिता र फीफा 12 भर एकदम अक्सर - कुनै अपवाद छ। प्रतियोगिताहरू फीफा 12 को रूपमा लगभग एक वर्ष पहिले, खेल को अर्को भाग आयो, तर प्रशंसक बीच एक वर्ष उत्पादन हेर्न भनेर, र खेल को एक विशेष श्रृंखला प्रक्रिया आनन्द व्यक्तिगत टुक्रा प्रेमीहरूलाई छन्, त्यसैले लोकप्रिय छैन। र मामला मा प्रतियोगिताको फीफा 12 को लागि, तपाईं प्रतियोगिताको भाग हुनेछ भन्ने कम्प्युटर, सबै फोल्डरहरू अंग्रेजी नाम छ भनेर निश्चित गर्न अग्रिम पर्छ छ।
कसरी ट्यांक को विश्व मा आफ्नो पासवर्ड परिवर्तन गर्न र आफ्नो भूल कसरी रिकभर गर्ने?
खेल डाउनलोड कसरी धार वा धार सबै मार्फत
Warface: समीक्षा। Warface - अनलाइन शूटर Crysis विकासकर्ता
आईडी वस्तुहरु, Skyrim: सूची। कसरी बाहिर Skyrim वस्तुहरू को आईडी फेला पार्न?
"दुश्मन लाइन्स2पछाडि: तूफान" खेल Cheats
बाह्य र आन्तरिक प्रेरणा: परिभाषा, गठन र कारक को सुविधाहरू
प्रकार र अलमारियाँ, आफ्नो फाइदा र बेफाइदा
को कोस्ट्रोमा क्षेत्र को लाल बुक: जनावर र बिरुवाहरु
कारखाना, भोजन, खनिज र हर्बल - अनुहार लागि सबै यो सफाई मास्क
एफ Kafka "परिवर्तन": सारांश, विश्लेषण, समीक्षा
दूध च्याउ। Contraindications तपाईं जान्नुपर्दछ
खेल पोषण पूरक कुनै-Xplode: मूल्यांकन को प्रयोग
अलग भोजन क्षेत्र भान्सा
भूल सोभियत संघ खिलौने: कार
कालो डेजर्ट: कसरी एक गाँठो समातेर